Gịnị bụ oké ifufe na-acha akwụkwọ ndụ? | Netwọk Mgbasa Ozi
Anyị nwere nnukwu ihu ọma ibi na mbara ala ebe ihe ịtụnanya ihu igwe dị, dịka oke ifufe. Mgbe ha na ngwaọrụ eletriki na-esonyere ha, ha na-adọrọ mmasị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha na-eme n'abalị. Ma, You nụla banyere oke ebili mmiri?
Mba, ha abụghị akụkọ ifo, n'agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na ha nwere ike ịbụ. Ha mara ezigbo mma, ọ bụ ezie na ha dị ize ndụ. Ka anyị mara ihe kpatara ya.
1 Kedu ihe bụ oke ifufe na-acha akwụkwọ ndụ na kedu ka esi hibe ha?
2 Ma ha bụ n'ezie akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ?
3 Gịnị kpatara ha ji dị egwu?
Kedu ihe bụ oke ifufe na-acha akwụkwọ ndụ na kedu ka esi hibe ha?
Ọ bụ ụdị ihe atụ nke oge opupu ihe ubi na ọkọchị nke ejiri acha na acha odo odo nke ọ na-enweta na elu ya. Igwe ojii nke na-emepụta ya nwere ọdịdị yiri owu ma dịrị n’elu. Mmepe ya dị oke ọsọ, nke mere na anyị ga-achọpụta ísì mmiri ozuzo ozugbo.
N'ikpeazụ, mmụba nke ikuku ifufe ga-eme ka anyị mara na ajọ ifufe na-amalite. Nke ahụ bụ mgbe, iji chebe onwe anyị, anyị ga-echebe onwe anyị.
Ma ha bụ n'ezie akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ?
Mgbe ngwa eletriki nke soro oké ifufe dị ike, ọ nwere ike "tint" igwe ojii achaba ma ọ bụ acha akwụkwọ ndụ. Nke a kọwara n'ihi ìhè ejiri ionized nitrogen molecules na-ekpuchi ọkụ. N’ihi ya, ụfọdụ ajọ ifufe dị egwu na-ewere ọnọdụ.
Gịnị kpatara ha ji dị egwu?
A na-ejikọkarị oke ifufe Green na ihe omume ihu igwe dị oke njọ. Na United States, mba oke mmiri ozuzo, ha dịkarịsịrị. Mgbe ọnọdụ nke oke ọkụ na-eme na ikuku ikuku na-ekpo ọkụ na obere akpa ikuku oyi na-abịa, a na-emepụta cyclones nke nwere ike bụrụ ihe ịtụnanya ahụ ma ọ bụ ifufe..
Ọ bụ ezie na nke a abụghị ihe niile. Ìhè anyanwụ na-ekpebi oke nke igwe ojii. Ọ bụrụ na oké ifufe ahụ malitere ịmalite ma ọ bụ pụọ na mgbede, ìhè anyanwụ ga-ekpochapụ ụda anụnụ anụnụ, ebe ọ bụ na mgbe ọ na-egosipụta kristal ice nke ígwé ojii, ha ga-eme ka agba akwụkwọ ndụ.
You hụla mmiri ozuzo ọ bụla?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Gịnị bụ oké ifufe na-acha akwụkwọ ndụ?